လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရောဂါများသည်ကြွက်များတွင် Mesolimbic System ကို (၂၀၀၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်-Associated သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအမျိုးသားသည်အထိ (2004) အတွက် Mesolimbic System ကို Activate
မာဂရက်အီး Balfour1, လဲ့ယု1 နှင့် Lique က M Coolen1
1neuroscience ဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, Neurobiology နှင့်ခန္ဓာဗေဒဌာန, ဆေးပညာ၏စင်စင်နာတီကောလိပ်၏တက္ကသိုလ်, စင်စင်နာတီ, OH, အမေရိကန်နိုင်ငံ
စာပေးစာယူ: ဒေါက်တာ LM Coolen, ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ, Neurobiology နှင့်ခန္ဓာဗေဒဌာန, ဆေးပညာ၏စင်စင်နာတီကောလိပ်၏တက္ကသိုလ်, Molecular လေ့လာရေး Vontz စင်တာ, 3125 ဧဒင်ရိပ်သာ, စင်စင်နာတီ, OH 45267-0521, USA ။ Tel: + 513 558 1209; ဖက်စ်: + 513 558 4454; E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
8 သြဂုတ်လ 2003 ကိုလက်ခံရရှိ; ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော6အောက်တိုဘာလ 2003; ၂၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၉ ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ဝေသည်။
အဆိုပါ mesolimbic စနစ်ကထိုကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်ပုံမှန်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေအဖြစ်ရောဂါဗေဒအပြုအမူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ T ကသူကလက်ရှိလေ့လာမှုဒီစနစ် endogenously လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated သောအားဖြင့်ယန္တရားစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အထူးသဖြင့် mesolimbic စနစ်၏အတော်ကြာအစိတ်အပိုင်းများ၏ activation အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ mesolimbic စနစ်နျူကလိယ accumbens ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှတစ်ဦး dopaminergic Project (NAc) ၏ပါဝင်ပါသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများကဤအာရုံခံ mu opioid အဲဒီ receptor (Mor) ligands အားဖြင့် modulated အလှည့်နေသောဒေသခံဂါဘမြို့သား interneurons ကလုပ်သူများတားစီးအောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA အတွက်သရုပ်ဆောင်သောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့, VTA အတွက် Mor International ၏ visualization အဲဒီ receptor ၏ ligand-သွေးဆောင် activation များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Mor International အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးသုတ်ရည်ထိသို့မဟုတ်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအာရုံခံ activation များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် Fos-immunoreactivity များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် tyrosine hydroxylase သုံးပြီး, အ VTA အတွက် dopamine အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ activated dopaminergic အာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးလိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှအောက်ပါသုတ်ရည်ထိသို့မဟုတ်ထိတွေ့လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိတ်လိုက်နှင့်လိင်-ဆက်စပ်တွေကို VTA အတွက် nondopaminergic အာရုံခံ၏ကြီးမားသောလူဦးရေ activated အဖြစ် NAc Core နှင့်ရှဲလ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အာရုံခံ။ အတူတူယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ mesolimbic system ကိုလိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activated ကြောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomical သက်သေအထောက်အထားသည်။
ventral tegmental ဧရိယာ, နျူကလိယ accumbens, dopamine, mu opioid အဲဒီ receptor, endocytosis, ဂါဘမြို့သား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, Fos
အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ကိုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းညှိသည့်အာရုံကြော circuitry ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်မကြာခဏစွဲအဖြစ်လူသိများအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးရောဂါဗေဒထားမှုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေး exogenous လျှောက်လွှာကနေတဆင့် activated နိုင်ပါသည်။ သို့သော် mesolimbic စနစ်ကလည်းထိုကဲ့သို့သောနို့တိုက်ကျွေးရေး, အရက်သောက်, ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်ပုံမှန်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများကဒီလမ်းကြောင်း၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြစဉ်တွင်, လျော့နည်းသည့်သဘာဝအခြေအနေများအောက်၌ mesolimbic စနစ်၏ function ကိုအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာ mesolimbic dopamine system ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောအားဖြင့် endogenous ယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေး။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (သုတ်ရည်လွှတ်အတူအထှတျအထိ, သောတိရစ္ဆာန်တောင်ပေါ်နှင့် intromits တစ်သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကာအစာစားချင်စိတ်ချဉ်းကပ်မှုအဆင့်ပါဝင်ပါသည်အခွံ et al, 2002) ။ အမူအကျင့်လေ့လာမှုများကြောင့်အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ညွှန်ပြအထူးသဖြင့်တစ်ဦးကြိုးများနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူသုတ်ရည်လွှတ်-ဖြစ်ပါတယ်။ အထီးကြွက်များအလွယ်တကူ (သုတ်ရည်ထိဖို့ conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွံ့ဖြိုးAgmo နှင့် Berenfeld, 1990; Agmo နှင့်ဂိုမက်ဇ, 1993; Meisel et al, 1996; သိပ်မရှိပါဘူးနှင့် Alonso, 1997; လိုပက်ဇ် et al, 1999; Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2001), နှင့်လိင်လက်ခံအမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှအော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် (Everitt et al, 1987; Everitt နှင့် Stacey, 1987).
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကိုနျူကလိယ accumbens မှစီမံကိန်းအား (NAc) တွင်တည်ရှိသောအာရုံခံထုတ်လုပ် dopamine ပါဝင်သည်ဟုအဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်, (DA), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကြိုးရှုထောင့်တစ်ဦးဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ Microdialysis လေ့လာမှုများ (dopamine အမျိုးသမီး၏တင်ပြချက်အပေါ်မှာ NAc သို့ဖြန့်ချိကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ Display ကိုတလျှောက်လုံးမွငျ့မားဖြစ်နေဆဲရှိသည်ဟုPfaus et al, 1990; Pfaus နှင့် Phillips က, 1991; Damsma et al, 1992; Wenkstern et al, 1993) ။ ထို့ပြင် NAc သို့ DA အဲဒီ receptor agonists ၏ပြုတ်ရည် (အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်Everitt et al, 1989), ရန် (inhibitory သက်ရောက်မှုရှိစဉ်အခါPfaus နှင့် Phillips က, 1989). အဆိုပါ VTA အတွက် dopaminergic projection အာရုံခံဒေသခံ GABAergic interneurons နေဖြင့်လုပ်သူများတားစီးအောက်တွင်များပါတယ်. ဂျီ၏ stimulationI / Oအလှည့်အတွက် dopaminergic projection အာရုံခံ၏ disinhibition နှင့် NAc သို့ DA ၏နောက်ဆက်တွဲဖြန့်ချိဖို့ကိုဦးဆောင်သောဤ GABAergic အာရုံခံ၏တားစီးအတွက် mu opioid အဲဒီ receptor (Mor) ရလဒ်များကို -coupled ။ ဤသည် circuitry မော်ဒယ် (မျိုးစုံကို electrophysiological နှင့် pharmacological လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်မဿဲနှင့်ဂျာမန်, 1984; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992; Klitenick et al, 1992; Ikemoto et al, 1997), နှင့်ရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ် ပုံ 1. ကျနော်တို့ dopaminergic projection အာရုံခံ၏ disinhibition အတွက်ရရှိလာတဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကာလအတွင်း endogenous opioids အဆိုပါ VTA သို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်, ထို hypothesize ။ ဒါကယူဆချက် (အ VTA သို့ထုံမွှန်း opioid ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတားစီးကြောင်းသရုပ်ပြလေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည်ဗန် Furth နှင့်ဗန် Ree, 1996) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုကဒီမော်ဒယ် neuroanatomical သက်သေအထောက်အထားများကိုဒီဇိုင်းစမ်းသပ်ချက်အစုတခုပါဝင်ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း mesolimbic activation ၏အဆိုပြု circuitry မော်ဒယ်။ ဒီ model များတွင် endogenous opioid peptides GABAergic interneurons ဟန့်တား, Morse ဖို့ VTA နှင့်ချည်သို့ဖြန့်ချိနေကြပါတယ်။ ဒါက NAc သို့ DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, တားစီးကနေ dopaminergic projection အာရုံခံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်အထူးသဖြင့် GABAergic အာရုံခံမှလေးစားမှုနှင့်တကွ, VTA အတွက် Mor ၏ခန္ဓာဗေဒဖြန့်ဖြူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာတိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ pharmacological အချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနနေသော်လည်းအတော်လေးနည်းနည်းဒီ circuitry ၏ခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းကအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဒါဟာ (Mor အဆိုပါ VTA အတွက် nondopaminergic အာရုံခံအတွက်အဓိကအားဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီးGarzon နှင့် Pickel, 2001) ။ Mor ဂါဘမြို့သားအာရုံခံပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့မသိနိုင်ပါဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ခြုံငုံရည်မှန်းချက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA အတွက် Mor နှင့် DA အာရုံခံ၏ activation စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ opioids လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း VTA သို့ဖြန့်ချိသောအယူအဆစမ်းသပ်ဖို့, ကျနော်တို့အဲဒီ receptor ၏ ligand-သွေးဆောင် activation များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် Mor International ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီနည်းပညာက G-ပရိုတိန်း-coupled receptors ligand binding အောက်ပါ endocytosis ခံယူဆိုတဲ့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ။ အထူးသဖြင့်, Morse နှစ်ဦးစလုံး ligand-သွေးဆောင် endocytosis ခံယူပြခဲ့ကြ စသည်တို့အတွက် (Keith et al, 1998) လည်းပဲ Vivo အတွက် (Eckersell et al, 1998; Trafton et al, 2000; Sinchak နှင့် Micevych, 2001) ။ Internalized endosome ကဲ့သို့သောအမှုန် confocal microscopy သုံးပြီးမြင်နိုင်ပါသည်, ဤအမှုန်များ၏အရေအတွက် endogenous opioid peptide လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာပေးပါသည်။ ထို့အပြင်, ဒီ technique ကို endogenous opioid လုပ်ဆောင်ချက်၏ပစ်မှတ်၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်ဆယ်လူလာ resolution ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လာမယ့်ရည်မှန်းချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာ VTA အတွက် DA အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့အာရုံခံ activation တစ်အမှတ်အသားအဖြစ် Fos immunoreactivity (Fos-မှာ IR) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် NAc လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံး NAc Core နှင့်ရှဲလ်ငျဒသေအတွက် Fos-မှာ IR quantified ။
အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း mesolimbic စနစ်၏ activation အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ လူသားမြားသညျတှငျ, မူးယစ်ဆေးစွဲမကြာခဏ (မူးယစ်ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့အောက်ပါတဏှာ၏ပြင်းထန်သောအကြိမ်ကြိမ်တိုင်ကြားChildress et al, 1988; Wallace, 1989) ။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကိုထိတွေ့ (တိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန်ခြင်းဖြင့်သက်သေသော mesolimbic dopamine စနစ်၏အခွအေနေ activation မှဦးဆောင်Duvauchelle et al, 2000) နှင့် NAc အတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ် (Ostrander et al, 2003) တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး-တွဲပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့အောက်ပါ။ ဒီထက်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်ပုံမှန်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမှအေးစက်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ တစ်ဝါယာကြိုးကွက် (နောက်ကွယ်မှတစ်ခု estrous အမျိုးသမီးနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါလိင်ကြုံတွေ့အထီးကြွက် NAc DA အတွက်တိုးမြှင့်ပြသDamsma et al, 1992) ။ သို့သော်တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးအားဖြင့်ညစ်ညူးအိပ်ယာမှထိတွေ့မှုကိုလည်း (ထို NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်မစ်ချယ်နှင့် Gratton, 1991), နှင့်က mesolimbic စနစ်၏အေးစက် activation olfactory input ကိုအပေါ်မှီခိုရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်လိင်-ဆက်စပ် Spatial နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောတွေကို olfactory input ကို၏မရှိခြင်း၌, mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသကျနော်တို့လိင်ကြုံတွေ့ကြသည်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် mesolimbic စနစ်၏လိင်-သွေးဆောင် activation နှိုင်းယှဉ်ဖို့အထက်ဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်များအသုံးပြုခဲ့ vs ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ mesolimbic DA စနစ်၏ activation အပေါ်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနား enviroments မှာသူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံရရှိခဲ့ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague-Dawley ကြွက် (250-260 ဂရမ်) Harlan (Indianapolis, IN) မှရရှိသောနှင့်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်များအတွက် Plexiglas လှောင်အိမ်ထဲမှာတစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်။ ကိုလိုနီအခန်းထဲမှာ 12 / 12 ဇအပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည် (1000 ဇရက်ပယ်ထွန်း) Light-မှောင်မိုက်သံသရာကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ အစားအစာနှင့်ရေရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ မိတ်လိုက်အပြုအမူစမ်းသပ်မှုများအတွက် stimulus အမျိုးသမီးမြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized တို့ 5% estradiol benzoate (eb) နှင့် 95% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception 500 ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်သွေးဆောင်ခဲ့သည် စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 0.1 ml ကိုနှမ်းဆီ,5ဇအတွက်ပါ g ချို့ယွင်းသော (အရေပြားအောက်ဆုံး) ။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးစင်စင်နာတီတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြု, နှင့်သုတေသနအတွက်ကျောရိုးရှိသတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်များပါဝင်သော NIH လမ်းညွှန်ချက်တညီတည်းခဲ့ကြသည်။
ရှစ်စမ်းသပ်အုပ်စုများကိုတွေ့မြင် (ဒီစမ်းသပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည် စားပွဲတင် 1) ။ ဒီအုပ်စုတွေရင်တော့မှားမယ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအတွက်ကွဲပြား vs အတွေ့အကြုံရှိ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်, ပတ်ဝန်းကျင် (အိမ်မှာလှောင်အိမ် vs စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်), နှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့၌အပြုအမူ (လိင် vs unmated ထိန်းချုပ်မှု) ။ ပထမဦးစွာတိရစ္ဆာန်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်သူတို့စမျးသပျခဲ့ကြသည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသီးသီးအလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်လှောင်အိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ပါဝင်သည်။ အိမ်လှောင်အိမ်တိရစ္ဆာန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်စမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်များအတွက်သျောခဲ့ကြသည်ရသောစံ Plexiglas အိတ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ် 60 (ပိုကြီးပြီးအနံ့တွေကိုဘဲ, ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အိမ်လှောင်အိမ်ကနေမတူညီတဲ့တစ်လှောင်အိမ်ကိုရည်ညွှန်းသည် 45 50 စင်တီမီတာ3), အသီးအသီးစမ်းသပ် session တစ်ခုအတွင်းမှာနေရာချခဲ့ကြသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ဒီစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ကိုအစည်းအဝေးများအကြားအရက်ဖြေရှင်းချက် (၇၀%) နဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ထားပြီးအိပ်ယာခင်းသန့်ရှင်းစေပါတယ်။ လိင်မှုအတွေ့အကြုံရှိအုပ်စုများမှတိရစ္ဆာန်များအားတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်အကြိမ်စမ်းသပ်မှုအကြိုငါးကြိမ်ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုသန္ဓေသားလောင်းတစ်လုံးမှသုက်ပိုးတစ်မျိုးနှင့်သို့မဟုတ်မိနစ် ၆၀ ကြာခွင့်ပြုသည်။ ဤစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့၏အိမ်၌အိတ်များသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောအိပ်ယာခင်းထားသည့်ပိုမိုကြီးမားသောစမ်းသပ်ခန်းတွင်မိတ်လိုက်သည်။ စမ်းသပ်ဆဲလှောင်အိမ်တွင်လိင်အတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည့်သတ္တဝါများကိုအမျိုးသမီးမမွေးခင်မိနစ် ၆၀ ခန့်အကွာတွင်ထားရှိပြီးသုက်ပိုးတစ်ခုသို့မဟုတ် ၆၀ မိနစ်နှင့်မိတ်လိုက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ အိမ်လှောင်အိမ်တွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရရှိခဲ့သည့်အထီးများသည်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှလက်ခံသောအမျိုးသမီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးသုက်ပိုးတစ်လုံးသို့မဟုတ်မိနစ် ၆၀ ခန့်တွင်မိတ်လိုက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီမိတ်လိုက်ခြင်းအပြီး ၁ ပတ်အကြာတွင်လိင်အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များကိုမိတ်လိုက်ခြင်း (sex) နှင့် unmated ('control') အုပ်စုများ (စုစုပေါင်းလိင်အတွေ့အကြုံရှိသည့်အုပ်စုလေးစုခွဲခြားထားသည်)၊ N=4တစ်ခုချင်းစီ) ။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအနေဖြင့် 'လိင်' တိရိစ္ဆာန်များသည်အတွေ့အကြုံ၊ နေအိမ်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်များနှင့်ပတ်သတ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တူညီသောသန္ဓေသားလောင်းကိုမိတ်လိုက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်အိတ်များ၌လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည့်တိရိစ္ဆာန်များသည်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်ရှိနေပြီးလက်ခံသောအမျိုးသမီးကိုလက်ခံရရှိပြီးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်မိတ်လိုက်သည်။ စမ်းသပ်ဆဲလ်တွင်လိင်မှုအတွေ့အကြုံရရှိခဲ့သည့်တိရိစ္ဆာန်များကို ၁ နာရီခန့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးနောက်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲသို့ထည့်ပြီးအထီးများသည်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်မိတ်လိုက်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက် ၅ မိနစ်တွင်၊ အမျိုးသမီးပါတနာကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအထီးသည်အိမ်လှောင်အိမ် (သို့) စမ်းသပ်သည့်လှောင်အိမ်ထဲ၌ယဇ်ပူဇော်သည်အထိတစ်နာရီရှိနေခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်သည့်တိရိစ္ဆာန်များသည်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုနေ့တွင်လက်ခံသောအမျိုးသမီးပါတနာမရရှိခဲ့ကြပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံရရှိသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမတိုင်မီ ၂ နာရီကြာခံရန်အိမ်မွေးလှောင်အိမ်ထဲမှထုတ်ခြင်းခံရသည်။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနုံချာသောတိရိစ္ဆာန်များ (လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရရှိသည့်တိရိစ္ဆာန်များ) ကိုအိမ်လှောင်အိမ်ထဲ၌အနှောင့်အယှက်မပေးရ၊ သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ငါးကြိမ်ကျင်းပသောငါးကြိမ်တိုင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မပါ ၀ င်သည့်စမ်းသပ်ဆဲလ်များ၌ထားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်ကြွက်များအားကျပန်း 'sex' နှင့် 'control' အုပ်စုများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည် (စုစုပေါင်းလိင်အယူအဆမရှိသောအုပ်စုလေးစု၊ N=4တစ်ခုချင်းစီ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံရှိသောအုပ်စုများနှင့်ဆင်တူသည်၊ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်သည်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မှီကာလများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မှီစမ်းသပ်ဆဲလ်များနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသော ၀ တ္ထုများကိုအမျိုးသားများသည်တစ်နာရီကြာစစ်ဆေးရန်အိတ်ထဲတွင်ထည့်ပြီးနောက်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီးသန္ဓေသားလောင်းတစ်ခု ('sex') နှင့်မိတ်လိုက်သည်။ 1 နာရီ (unmated ထိန်းချုပ်မှု) အတွက်လက်ခံအမျိုးသမီးမပါဘဲစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲမှာထားရှိ။ အိမ်အိတ်များ၌ကျန်ရှိနေသေးသောအထီးများသည်လက်ခံသောအမျိုးသမီးကိုရရှိပြီးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း ('sex') နှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်လှောင်အိမ်မှသေဆုံးခြင်း (unmated control) ဖြစ်သည်။ 'sex' အုပ်စုများတွင်သန္ဓေတည်ပြီးနောက် ၅ မိနစ်အကြာတွင်အမျိုးသမီးပါတနာအားဖယ်ရှားခဲ့ပြီး၊ အထီးများသည်ယဇ်ကောင်မကုန်မှီတိုင်အောင်အိမ်တွင်းလှောင်အိမ် (သို့) စမ်းသပ်လှောင်အိမ်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။
ဇယား 1 - စမ်းသပ်အုပ်စုများ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း pentobarbital (200 / ကီလိုဂရမ် mg) ကို အသုံးပြု. anesthetized နှင့် 100 M ကဖော့စဖိတ်ကြားခံ (PB; သော pH 0.9) အတွက် 500% paraformaldehyde ၏4ml အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 0.1% NaCl ၏ 7.3 ml နှင့်အတူ transcardially perfused ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်ထို့နောက် 1 M က PB အတွက် 20% sucrose ထဲတွင်နေရာနှင့် 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုလှောင်ထားသည့် fixative အတွက်အခန်းအပူချိန်မှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့်4ဇများအတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (35 မီတာ) cryoprotectant ဖြေရှင်းချက် (30% sucrose, 30 M က PB အတွက် 0.1% Ethylene glycol လေးအပြိုင်စီးရီးအတွက်စုဆောင်းနေတဲ့အေးခဲနေသော microtome (ရစ်ချက်အယ်လန်, Kalamazoo, MI), ပေါ်ဖြတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, Watson et al, 1986), နှင့်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့သည်အထိ -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထား။
အားလုံးပေါက်ဖွားနူးညံ့သိမ်မွေ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအခန်းအပူချိန်မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမဲ့-floating ကဏ္ဍများပေါက်ဖွားအကြား 0.1 M ကဖော့စဖိတ်-buffered ဆား (PBS) နဲ့ကျယ်ပြန့်ကိုဆေးကြောခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ 10% H ကိုအတူ 1 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်2O2ထို့နောက် (PBS 1% bovine သွေးရည်ကြည် albumin နှင့် 0.1% Triton X-0.4 ်) ပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ 100 ဇများအတွက်ပိတ်ဆို့။ အားလုံးမူလတန်း antibody ကိုပေါက်ဖွားနေ့ချင်းညချင်းအခန်းအပူချိန်မှာထိုပေါက်ဖွားဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အစွန်းအထင်းကိုအောက်ပါခြင်း, အပိုင်း ddH အတွက် 0.1% gelatin နှင့်အတူဖန်ဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထား, 0.3 M က PB အတွက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောခဲ့သည်21,4 မီလီဂရမ် / ml, Sigma-Aldrich, စိန့်; အိုနှင့် DPX (Electron microscopy သိပ္ပံ, ဝိန်း Fort ဝါရှင်တန်, PA) သို့မဟုတ် anti-နွမ်းအေးဂျင့် 2,2-diazabicyclo (50) ကထုတ်တဲ့ (DABCO င်တစ်ဦး aqueous mounting အလတ်စား (Gelvatol) နဲ့ coverslipped လူးဝစ်, MO ကို), ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုပြင်ဆင် (Harlow နှင့်လမ်း, 1988) ။ Immunocytochemical ထိန်းချုပ်မှုမူလတန်းပဋိ၏ပျက်ကွက်ပါဝင်သည်။ VTA နှင့် / သို့မဟုတ် NAc စီးရီးအောက်ပါအမှတ်အသားများအဘို့အစွန်းခဲ့ကြသည်:
1: biotinylated မြည်း Anti-ယုန် IgG (7500 နှင့်အတူတစ်နာရီပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: (Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA 52;; SC-1 400) VTA နှင့် NAc အပိုင်းက c-Fos ရန်ယုန် polyclonal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် ; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) နှင့် avidin-horseradish peroxidase ရှုပ်ထွေးသော (1: 1000; Credit: ABC Elite Kit, Vector Laboratories, Burlingame,, CA) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဏ္ဍ 10% အတွက် 0.02 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ အပြာရောင်-အနက်ရောင်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, 0.1% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်နှင့် 0.012% နီကယ် sulfate်0.08 M က PB ပြခြင်း, (Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို DAB) diaminobenzidine ။ (; 1 400; Chemicon အင်တာနေရှင်နယ်, Temecula,, CA 000 TH), biotinylated မြည်း Anti-mouse ကို IgG အလယ်တန်း antibody ကို (1: ယင်းနောက် VTA ကဏ္ဍများ hydroxylase tyrosine မှ mouse ကို monoclonal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် 400; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA ဆိုပြီး) နှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ Credit: ABC ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်နီ-အညိုရောင်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိလာတဲ့, 10% ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်င် 0.02 M က PB အတွက် 0.1% DAB အတွင်း 0.012 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။
VTA ကဏ္ဍများကိုကြွက် MOR1 ၏ C-terminal ကိုဒေသအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ယုန် polyconal antibody ကိုနှင့်အတူနေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် (1: 10 000; DiaSorin, Saluggia, အီတလီ), biotinylated မြည်း Anti-ယုန် IgG နှင့် ABC ရုပ်သံ, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့။ ထို့နောက်ကဏ္ဍများကို BT (biotinylated tyramide နှင့်အတူ 10 မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးကြသည် ဟူ. ၎င်း, 1: 250 PBS အတွက် + 0.003% H ကို2O2; Tyramide Signal Amplification Kit, NEN ဘဝကသိပ္ပံဘော်စတွန်, MA) နှင့် CY-30 conjugation steptavidin နှင့်အတူ3မိ (1 များအတွက်: 200; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ။
ဂါဘမြို့သား / Mor
1: နှင့် Alexa 1000 (30 မှ conjugated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင် mouse ကို IgG နှင့်အတူ 488 မိဘို့; VTA ကဏ္ဍများဂါဘမြို့သားတစ်ဦး mouse ကို monoclonal antibody ကို (Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို TX မပါဘဲ PBS / BSA အတွက် 1 200) နဲ့နေ့ချင်းညချင်းနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် PBS / BSA အတွက်; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါကဏ္ဍများထို့နောက် Mor များအတွက်စွန်းခဲ့ကြသည်။
ထွေအုပ် / TH
, biotinylated မြည်း Anti-ယုန် IgG, ABC ရုပ်သံ, BT နှင့် CY-1-conjugation streptavidin နှင့်အတူပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်:; VTA ကဏ္ဍများကိုအချိုမှုအက်ဆစ် decarboxylase (1500, Chemicon အင်တာနေရှင်နယ်, Temecula,, CA3ထွေအုပ်) အသိအမှတ်ပြုနေတဲ့ယုန် polyclonal antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း။ (; 1 40; Chemicon အင်တာနေရှင်နယ်, Temecula,, CA 000 TH), Alexa 30 (488 မှ conjugated ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင် mouse ကို IgG အတူ 1-မိပေါက်ဖွားခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: 200 ယင်းနောက်ကဏ္ဍများ hydroxylase tyrosine မှတစ်ဦး mouse ကို monoclonal antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် ; Jackson က ImmunoResearch Laboratories, အနောက် Grove, PA) ။
အဆိုပါ VTA ၏ခန္ဓာဗေဒခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ထပ် 1 ၏ မီတာ optical ကဏ္ဍများအတွက်တစ်လျှောက်တွင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည် zတစ်ဦး Zeiss LSM-510 လေဆာ-scanning ဏုသုံးပြီး -axis ။ CY3-fluorescent 567 nm ထုတ်လွှတ် filter ကိုနှင့်အာဂွန်လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ 488 nm ထုတ်လွှတ် filter ကိုနှင့်သူ-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းလေဆာနှင့်အတူ imaged နှင့် Alexa 505 ခဲ့သည်။ TH အာရုံခံမှဆွေမျိုးထွေအုပ်-မှာ IR အမျှင်၏ဖြန့်ဖြူးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဂါဘမြို့သား-မှာ IR ဆဲလ်အသေကောင်မှစပ်လျဉ်း Mor ၏တည်နေရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး Mor-မှာ IR အာရုံခံ၏ rostrocaudal ဖြန့်ဖြူးဂါဘမြို့သားတဦးတည်းတိရိစ္ဆာန်အတွက် quantified ခဲ့သည် Co-ဖော်ပြ။ ထို့အပြင် VTA တစ်လျှောက်လုံး Mor-မှာ IR ဆဲလ်အလောင်းတွေပေါ် rostrocaudal ဖြန့်ဖြူးသုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီကို Pre-Test နှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မိတ်လိုက် session ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်: intromissions ၏တောင်ပေါ်အရေအတွက် (# မိနစ်), နံပါတ် (#I), mount နှင့် intromission latency (ML နှင့် IL, အမျိုးသမီး၏တင်ဆက်မှုအနေဖြင့်အချိန် ie သုတ်ရည်လွှတ်မှပထမဦးဆုံး intromission ကနေအချိန်); ပထမဦးဆုံးတောင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ် intromission), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အောင်းနေချိန် (EL ရန်။ pre-စမ်းသပ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏နောက်ဆုံးနေ့အဘို့အသီးအသီးအတိုင်းအရှည်၏ရလဒ်များမိတ်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင် (အိမ်မှာလှောင်အိမ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, တစ်ဦးတည်း-လမ်း ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် vs စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံထိခိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှု နေ့မှစ. ရလဒ်များတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA (အချက်များ: အတွေ့အကြုံ, ပတ်ဝန်းကျင်) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယောက် post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် Fisher's PLSD ကို အသုံးပြု၍ အသိသာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
VTA အာရုံခံအတွက် endosome ရေတွက်၏အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဘို့, z1 ၏ -stacks 15-30 အာရုံခံမှတဆင့်မီတာ optical ကဏ္ဍများကိုတစ်ဦး Zeiss လေဆာ-scanning confocal ဏုစနစ် (Zeiss LSM-510) ကိုသုံးပြီးဖမ်းမိခဲ့သည်။ အဆိုပါအာရုံခံမှတဆင့်ရုပ်ပုံများကိုအသီးအသီး stack ၏, ထိုအာရုံခံဆဲလျ၏အလယ်တွင်နှစ်ခုဆက်တိုက်ကဏ္ဍများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ immunoreactive intracellular အမှုန်များ၏နံပါတ်များသည်စမ်းသပ်ဆဲအုပ်စုတစ်ခုလေ့လာသူမျက်စိကန်းသောအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကလာပ်စည်းအဘို့ရေတွက်ခဲ့ကြသည်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အနှုန်းပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, internalized Mor-မှာ IR ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း quantified ခဲ့သည်; သုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို immunoreactive intracellular မှုန်် Mor-မှာ IR အာရုံခံ internalized စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များသုံးလမ်း ANOVA (အချက်များ: မိတ်လိုက်, အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယောက် post ကို hoc 5% အရေးပါမှုအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြု။ နှိုင်းယှဉ် (Fisher ရဲ့ PLSD) ။ ဓာတ်ပုံများကို Adobe Photoshop 7.0 (Adobe Systems, San Jose, CA) သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ တောက်ပမှုမှအပဓါတ်ပုံများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြုပြင်မထားပါ။
တစ်ဦး Leica ဏုတွဲနေတဲ့ပုံဆွဲပြွန်အသုံးပြုခြင်း (Leica Microsystems ကို; Wetzlar, ဂျာမနီ), ကင်မရာ lucida ရေးဆွဲတစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်ကနေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပိုင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ VTA ခုနှစ်တွင်, ကင်မရာ lucida ရေးဆွဲခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေးအပိုင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် 280 အဆိုပါ VTA (ထဲမှာ caudal အဆင့်လေး rostral ၏ကိုယ်စားလှယ်, ဆိတျကှ့ပုံ 2) ။ အထင်ကရအဆောက်အအဖြစ် TH အစွန်းအထင်းများနှင့် medial lemniscus (ml) ၏တည်နေရာနဲ့ fasciculus retroflexus (fr) ကိုသုံးပြီး, စံဒေသများ Fos-မှာ IR အရေးပါနှင့် Fos / TH ကို double-label တပ်ထားသောဆဲလ်တွေရေတွက်ဖို့ရာအတွက်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ cell အရေအတွက် 2.16 မီလီမီတာအထိစံဒေသများရှိဖျော်ဖြေခဲ့ကြ2 1.6 မီလီမီတာမှ (rostral နှစ်ခုအလယ်အဆင့်ဆင့်)2 (အများဆုံး caudal အဆင့်အထိ) ။ အဆိုပါ NAc ခုနှစ်တွင်, ကင်မရာ lucida ရေးဆွဲခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးအပိုင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် 600 အဆိုပါ NAc (သုံး rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့်၏ကိုယ်စားလှယ်, ဆိတျကှ့ပုံ 3) ။ 0.24 မီလီမီတာ၏အသီးအသီးအဆင့်မှာ, စံဒေသများ2 အဆိုပါ NAc Core နှင့် NAc Shell ကနှစ်ဦးစလုံးအတွက် Fos-မှာ IR အရေးပါရေတွက်ဖို့ရာအတွက်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ Group မှနည်းလမ်း NAc နှင့် VTA နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သီးခြား rostral-to-caudal အဆငျ့အဘို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လေးပျမ်းမျှ (VTA) သို့မဟုတ်သုံးခု (NAc) rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့်တိရိစ္ဆာန်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း, အုပ်စုတစ်စုနည်းလမ်းများတိရိစ္ဆာန်ပျမ်းမျှအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များသုံးလမ်း ANOVA (အချက်များ: မိတ်လိုက်, အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယောက် post ကို hoc 5% အရေးပါမှုအဆင့်ဆင့်ကိုအသုံးပြု။ နှိုင်းယှဉ် (Fisher ရဲ့ PLSD) ။ အထူးသဖြင့် rostrocaudal အဆင့်တစ်ခုစီတွင် (၁) လိင်အုပ်စုတစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု၊ (၂) ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့အားလုံးနှင့် (၃) လိင်အုပ်စုအားလုံးအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ immunostained အခန်းကဏ္ of များ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များကို Leica ဏု (Leica Microsystems; Wetzlar, Germany) နှင့်တွဲဖက်ထားသောဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာ (Magnafire, Optronics) ကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ယူခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများကို Adobe Photoshop 1 (Adobe Systems, San Jose, CA) သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ ရံဖန်ရံခါတောက်ပသောအလင်းကိုချိန်ညှိခြင်းမှအပဓါတ်ပုံများကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှပြုပြင်မထားပါ။
caudal အဆင့်လေး rostral မှာ VTA ထဲမှာ, သေတ္တာများအားဖြင့်ညွှန်ပြ Fos / TH-မှာ IR ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒေသများသရုပ်ဖော်သိထားရေးဆွဲ။ (က) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ = 1.8 မီလီမီတာ၏ Rostral, ဧရိယာ 1.2 မီလီမီတာ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ = 1 မီလီမီတာ (ခ) အလယျပိုငျး-1.8, ဧရိယာ 1.2 မီလီမီတာ။ (ဂ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ =2မီလီမီတာ၏အလယျပိုငျး-1.8, ဧရိယာ 1.2 မီလီမီတာ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ဃ) Caudal, ဧရိယာ = 1.6 မီလီမီတာ 1.0 မီလီမီတာ။ အတိုကောက်: aq, ဦးနှောက်ရစေီးရလောမွောငျး, PAG, periaquaductal မီးခိုးရောင်; fr, fasiculus retroflexus; ml, medial lemniscus; cpd, ဦးနှောက် peduncle; SN, substantia nigra, LG က, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် geniculate ရှုပ်ထွေး; SPFp, parvicellular တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း thalamus subparafasicular နျူကလိယ; VPM, ventral posteriomedial နျူကလိယ thalamus, PH သည်, posterior hupothalamic နျူကလိယ; MRN, mesencephalic reticular နျူကလိယ; MGv, medial geniculate ရှုပ်ထွေး ventral တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း; APN, anterior pretectal နျူကလိယ; SC, သာလွန် colliculus; MM, medial mammillary နျူကလိယ။
သုံး rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့် (က-ဂ) မှာ NAc core နဲ့ shell ကိုအတွက် Fos-မှာ IR ၏ (ထိုသေတ္တာများအားဖြင့်ညွှန်ပြ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဒေသများသရုပ်ဖော်သိထားရေးဆွဲ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဧရိယာ = 400 m 600 မီတာ။ အတိုကောက်: ကို C, NAc core ကို; S က, NAc shell ကို; VL, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle; AC, anterior commissure; cc, Corpus callosum; EC, ပြင်ပဆေးတောင့်; က CP, caudate putamen ။
Mor-မှာ IR (axon ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဆဲလ်အသေကောင်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 4a), နှင့်ဂါဘမြို့သား-မှာ IR အာရုံခံမှအနီးကပ် apposition အတွက်အမျှင်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Mor-မှာ IR (ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ဂါဘမြို့သား-မှာ IR နှင့်အတူ colocalize မှလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 4a) ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Mor-မှာ IR အာရုံခံ၏ 79% Mor-မှာ IR အာရုံခံအများစုတည်ရှိသည်ရှိရာ VTA ၏ rostral တစျပိုငျးကိုအတွက်ဂါဘမြို့သား-မှာ IR coexpressed ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% သည်ဤ Mor-မှာ IR အာရုံခံ၏ Co-အမြန်ဂါဘမြို့သားပေမယ့်အနည်းငယ် Mor-မှာ IR အာရုံခံခြင်း, caudal VTA အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ (TH-မှာ IR မှအာရုံခံအဆိုပါ VTA တလျှောက်လုံးအနီးကပ် apposition အတွက်ထွေအုပ်-မှာ IR အမျှင်လေ့လာတွေ့ရှိပုံ 4b).
(က) VTA အတွက်ဂါဘမြို့သား-မှာ IR ဆဲလ် (တြိဂံ) နှင့်နီးစပ်သော apposition အတွက်ဂါဘမြို့သား-မှာ IR (အစိမ်းရောင်) ဆဲလ်အသေကောင် (မြှား) နှင့် Mor-မှာ IR အမျှင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး Mor (အနီ) သရုပ်ဖော် Confocal ပုံရိပ်။ (ခ) Confocal ပုံ VTA အတွက် (အစိမ်းရောင်) ဆဲလ်-မှာ IR th မှအနီးကပ် apposition အတွက်ထွေအုပ်-မှာ IR အမျှင် (အနီ) သရုပ်ဖော်။ (ဂ) တစ်ဦး nonmated ထိန်းချုပ်မှုတိရစ္ဆာန်၏ VTA အတွက် Mor-မှာ IR သရုပ်ဖော် Confocal ပုံရိပ်။ (ဃ) တစ်ဦး mated တိရစ္ဆာန်၏ VTA အတွက် Mor-မှာ IR သရုပ်ဖော် Confocal ပုံရိပ်။ မြှားအမှုန်များကဲ့သို့ Mor-မှာ IR endosome ဖော်ပြသည်။ (ခ-ဃ) တွင် Confocal ပုံရိပ်တွေ 1 များမှာ optical ကဏ္ဍများ့နှင့်ပုံရိပ် (က) တစ်ဦး5ဖြစ်ပါသည် optical အပိုင်း့။ Fos-မှာ IR အဆိုပါ VTA အတွက် (အနက်ရောင်, ဖြည့်တြိဂံ) နှင့် TH-မှာ IR (အညိုရောင်, ပွင့်လင်းတြိဂံ) ပုံ (င, f) Photomicrographs ။ double-label တပ်ထားသောဆဲလ်မွှားများကညွှန်ပြလျက်ရှိသည်။ စကေးဘား 10 ညွှန်ပြ m.
အဆိုပါလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျား၏ Pre-စမ်းသပ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်တိုင်းတာအတွက်သရုပ်ဖော်ကြသည် စားပွဲတင် 2။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံရယောက်ျားကသူတို့အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့သည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ဆန်းစစ် parameters များကိုမဆိုထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူးစားပွဲတင် 2) ။ အထူးသဖြင့်, pre-စမ်းသပ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်, အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated သောအထီးအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိကြ၏။ စမ်းသပ်မှုတစ်နေ့တာအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်တိုင်းတာအတွက်သရုပ်ဖော်ကြသည် စားပွဲတင် 3။ သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုစမ်းသပ်မှုနေ့က (F ကိုပေါ်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်(1,12)= 8.927; p= 0.0113; စားပွဲတင် 3) ။ စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာ mated ကြောင်းရင်တော့မှားမယ်အထီးစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာဖြစ်စေ mated ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မား mount မှတောင်ပေါ်နှင့်ကြာကြာ latency ၏နံပါတ်များ, intromission နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ ခြားနားချက်များအတွက်အရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူးသော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated သောရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူလမ်းကြောင်းသစ်လေ့လာတွေ့ရှိ post ကို hoc စမ်းသပ်မှုများ။ အိမ်မှာ mated ကြောင်းရင်တော့မှားမယ်အထီးအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်စာရင်းအင်းများသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု vs စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ကိုသာစမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated ကြောင်းရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသော IL အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ဇယား2- နောက်ဆုံးအကြိုစမ်းသပ်မှုမိတ်လိုက်ချိန်တွင်လိင်အပြုအမူအကျဉ်းချုပ်။
ဇယား ၃ - စမ်းသပ်မှုနေ့၌လိင်အပြုအမူအကျဉ်းချုပ်။
Mor ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် International (ထို rostral VTA တည်ရှိသောအာရုံခံအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်ပုံ 4c, ဃ), Mor-မှာ IR ဆဲလ်အသေကောင်များအများစုတည်ရှိရာ။ အဆိုပါ VTA (F ကိုအတွက်လိင်အပြုအမူကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့် Mor International(1,23)= 112.382; p<0.0001) ။ MOR-IR endosome ကဲ့သို့အမှုန်အရေအတွက်စမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်လိုက်သောယောက်ျားအားလုံးတွင်၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိတ်လိုက်ခြင်း - သိသိသာသာတိုးပွားလာခြင်း။ပုံ 5a, ဝပြောစွာ vs ပွင့်လင်းဘား; p<0.03) ။ ထို့အပြင်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတည်းနှင့်လည်းထိတွေ့မှုကြောင့် MOR အတွင်း၌သိသိသာသာတိုးများလာသည်။ အထူးသဖြင့်မိတ်လိုက်ခြင်း၊ အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တို့အကြားသုံးလမ်းကြားဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည် (F(123)= 16.370; p= 0.0005) နှင့် post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Mor International သိသိသာသာသူတို့ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ပေမယ့်ရှိသမျှသည်အခြားသော unmated ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ (နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာစမ်းသပ်နေ့၌မိတ်မပြုခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြပုံ 5aပွင့်လင်းဘား; p<0.05) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည် MOR-IR အာရုံခံဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည် (F(1,23)= 136.312; p<0.0001) ။ အထူးသဖြင့် MOR-IR အာရုံခံဆဲလ်များသည်စမ်းသပ်သည့်နေ့တွင်မိတ်လိုက်သောအမျိုးသားများတွင်၎င်းတို့၏ unmated ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည် (ပုံ 5b, ဝပြောစွာ vs ပွင့်လင်းဘား; p<0.03) နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့ပေမယ့်အခြား unmated ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိတ်ကြဘူးသောလိင်အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားအတွက် (ပုံ 5bပွင့်လင်းဘား; p
VTA အာရုံခံအတွက် Mor International ။ (က) ဆဲလ်နှုန်း Mor-မှာ IR endosome ကဲ့သို့သောအမှုန်များ၏နံပါတ်များ။ mean နံပါတ်များ အမူအကျင့်အုပ်စုတစ်စုနှုန်းဆဲလ်နှုန်း Mor-မှာ IR endosome ကဲ့သို့အမှုန်များ SEM ။ (ခ) Mor International ပြသသောဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း။ mean ရာခိုင်နှုန်း အမူအကျင့်အုပ်စုတစ်စုနှုန်းသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို endosomes ဆံ့ကြောင်း VTA Mor-မှာ IR ဆဲလ် SEM ။ အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ mated ကြောင်းအုပ်စုများကိုယ်စားပြုများနှင့်ပွင့်လင်းဘားစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်မထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းအုပ်စုများအကြားအဆိုပါစာရင်းအင်းဆက်ဆံရေးဟာအနိမ့်-ကိစ္စတွင်အက္ခရာများအားဖြင့်ညွှန်ပြလျက်ရှိ၏ ဘုံစာတစ်စောင်ကိုမျှဝေကြောင်းအုပ်စုများသိသိသာသာကွာခြားပါဘူး။
Dopamine အာရုံခံအတွက် Fos Expression
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-related ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပါ (VTA တစ်လျှောက်လုံး dopamine အာရုံခံ၏ activation အတွက်ရလဒ်ကိန်းဂဏန်းများ 4e,fနှင့် 6) ။ အဆိုပါ VTA (F ကိုတလျှောက်လုံး Fos ဖော်ပြ TH ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်မိတ်လိုက်၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်(1,24)= 99.774; p post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (မိမိတို့၏ unmated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသူတို့ unmated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အိမ်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ဖြစ်စေများတွင် mated ကြောင်းရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျား၌၎င်း, အိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ mated ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသားများအတွက် Fos စကားရပ်များတွင်သိသာထင်ရှားသောမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်တိုးညွှန်ပြပုံ 6, p<0.0001) ။ ထို့အပြင်မိတ်လိုက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြားနှစ် ဦး အပြန်အလှန်အပြန်အလှန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (F(1,24)= 12.479; p= 0.0017) ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ activated TH ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသိသိသာသာသူတို့ရှိသမျှသည်အခြားသော unmated ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ (နှိုင်းယှဉ်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့အတွေ့အကြုံရှိ unmated ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ညွှန်ပြပုံ 6, p<0.001) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, မိတ်လိုက်ထပ်မံ unmated ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိ cue- သွေးဆောင် activation မှဆွေမျိုး, အတွေ့အကြုံရှိအထီး၌ activated TH အာရုံခံ၏ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းမရှိသော်လည်းလိင် / သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သက်ရောက်မှုရှိသည့် TH အာရုံခံများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် VTA ၏ rostral အဆင့်များတွင် caudal အဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (စားပွဲတင် 4).
အဆိုပါ VTA အတွက် Fos-မှာ IR ဖြစ်ကြောင်း TH-မှာ IR ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း။ mean ရာခိုင်နှုန်း Fos-မှာ IR လေး rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့်ကျော်ပျမ်းမျှဖြစ်ကြောင်း TH-မှာ IR ဆဲလ် SEM ။ အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ mated ကြောင်းအုပ်စုများကိုယ်စားပြုများနှင့်ပွင့်လင်းဘားစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်မထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းအုပ်စုများအကြားအဆိုပါစာရင်းအင်းဆက်ဆံရေးဟာအနိမ့်-ကိစ္စတွင်အက္ခရာများအားဖြင့်ညွှန်ပြလျက်ရှိ၏ ဘုံစာတစ်စောင်ကိုမျှဝေကြောင်းအုပ်စုများသိသိသာသာကွာခြားပါဘူး။
ဇယား4- Fos ဖော်ပြသော TH ဆဲလ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း။
Nondopaminergic အာရုံခံအတွက် Fos Expression
TH အာရုံခံအတွက် Fos စကားရပ်သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်တွေကိုသော်လည်း, VTA အတွက် Fos-မှာ IR အာရုံခံများ၏အများစု (80-90%) TH ဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ ဤအ nondopaminergic အာရုံခံအတွက် Fos ထုတ်ဖော် analysis TH အာရုံခံ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့အလားတူသော induction ပုံစံထင်ရှားပုံ 7) ။ အထူးသ Fos စကားရပ်အပေါ်မိတ်လိုက်၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု (F ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်(1,24)= 40.093, p<0.0001) နှင့်သိသိသာသာမိတ်လိုက် - သွေးဆောင်တိုး Fos-IR ကိုအာရုံခံ၏နံပါတ်များကို၎င်းတို့၏အရိပ်၌အိတ်များနှင့်၎င်းတို့၏ unmated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာမိတ်လိုက်သောအ naifive အထီးအတွက်မိတ်လိုက်သောအတွေ့အကြုံရှိအထီး၌ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ unmated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (ပုံ 7, p<0.006) ။ ထို့အပြင်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြားသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် (F(1,24)= 5.288, p= 0.0305), နှင့် Fos စကားရပ်များတွင်သိသိသာသာတိုးထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခြား unmated ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများ (နှိုင်းယှဉ်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့သည့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၌ထားကြ၏ကြောင်းအတွေ့အကြုံရှိ unmated ယောက်ျားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ပုံ 7, p<0.02) ။ စမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်၌မိတ်လိုက်သောအတွေ့အကြုံရှိအထီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်သူတို့၏ unmated ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Fos ဖော်ပြမှုအဆင့်ကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါ VTA ၏သီးခြား rostrocaudal အဆင့်ဆင့်၏တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Fos စကားရပ်၏လေ့လာဆန်းစစ်စုစုပေါင်း VTA များအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထား Fos စကားရပ်၏အလားတူပုံစံထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် Fos-IR အာရုံခံအများစုကို VTA ၏ rostral level တွင်တွေ့ရှိရသည်။စားပွဲတင် 5), rostrocaudal အဆင့်ဆင့်အကြား Fos စကားရပ်များတွင်ကွဲပြားမှုကစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်။
အဆိုပါ VTA အတွက် Fos-မှာ IR ဖြစ်ကြောင်း nondopaminergic ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို။ mean နံပါတ်များ TH-မှာ IR မဟုတ် Fos-မှာ IR ဆဲလ် SEM လေး rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့်ကျော်ပျမ်းမျှ။ အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ mated ကြောင်းအုပ်စုများကိုယ်စားပြုများနှင့်ပွင့်လင်းဘားစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်မထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ mated ကြောင်းအုပ်စုများကိုယ်စားပြုများနှင့်ပွင့်လင်းဘားစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်မထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းအုပ်စုများအကြားအဆိုပါစာရင်းအင်းဆက်ဆံရေးဟာအနိမ့်-ကိစ္စတွင်အက္ခရာများအားဖြင့်ညွှန်ပြလျက်ရှိ၏ ဘုံစာတစ်စောင်ကိုမျှဝေကြောင်းအုပ်စုများသိသိသာသာကွာခြားပါဘူး။
ဇယား ၅ - Nondopaminergic Neurons တွင် Fos Expression ။
အဆိုပါ NAc အတွက် Fos Expression
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-related ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပါ (NAc အတွက်အာရုံခံ activation အတွက်ရလဒ်ပုံ 8) ။ အဆိုပါ NAc Core (F ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် Fos ဖော်ပြဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုအပေါ်မိတ်လိုက်၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်(1,24)= 457.265, p<0.0001) နှင့် NAc Shell (F(1,24)= 234.159, p<0.0001) ။ NAc Core တွင်၊ စမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်လိုက်သောအာရုံကြောဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာမိတ်လိုက်ခြင်း - သွေးဆောင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်လိုက်သောယောက်ျားအားလုံး၌ရှိသည်။ပုံ 8b, p<0.0001) ။ ထို့အပြင်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်(1,24)= 3.244, p= 0.0294) ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ activated ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုသိသိသာသာသူတို့ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (လက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့အတွေ့အကြုံရှိ unmated ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါပုံ 8b, p<0.002) ။ အလားတူစွာ၊ NAc shell တွင်၊ စမ်းသပ်မှုနေ့၌၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စမ်းသပ်သည့်နေ့၌မိတ်လိုက်သောအာရုံကြောဆဲလ်အရေအတွက်သိသိသာသာမိတ်လိုက်ခြင်း - သွေးဆောင်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ပုံ 8a, p<0.0001) ။ ထို့အပြင်မိတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အကြားနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်(1,24)= 8.725; p= 0.0069) ။ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (activated ဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုသိသိသာသာအပေါငျးတို့သညျအခွား unmated ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလက်ခံရရှိထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခဲ့အတွေ့အကြုံရှိထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါပုံ 8a, p<0.005) ။ rostrocaudal အဆင့်သုံးဆင့်မှရလဒ်များကိုတင်ပြထားသည် စားပွဲတင် 6a နှင့်ခ.
အဆိုပါ NAc အတွက် Fos-မှာ IR ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကို။ mean နံပါတ်များ အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက် Fos-မှာ IR ဆဲလ် (က) သို့မဟုတ် NAc core ကို SEM (ခ) သုံး rostral-to-caudal အဆင့်ဆင့်ကျော်ပျမ်းမျှ။ အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ mated ကြောင်းအုပ်စုများကိုယ်စားပြုများနှင့်ပွင့်လင်းဘားစမ်းသပ်မှုနေ့၌မိတ်မထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ယင်းအုပ်စုများအကြားအဆိုပါစာရင်းအင်းဆက်ဆံရေးဟာအနိမ့်-ကိစ္စတွင်အက္ခရာများအားဖြင့်ညွှန်ပြလျက်ရှိ၏ ဘုံစာတစ်စောင်ကိုမျှဝေကြောင်းအုပ်စုများသိသိသာသာကွာခြားပါဘူး။
ဇယား ၆ - (က) NAc အမာခံရှိ Fos Expression၊a (ခ) NAc shell ကိုb.
လက်ရှိလေ့လာမှု VTA အတွက် Mor နှင့် dopaminergic နှစ်ဦးစလုံးတွင် neuron လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ ဤရလဒ်သည် microdialysis နေဖြင့်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့် mesolimbic DA လမ်းကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated ကြောင်းအကြံပြု pharmacological လေ့လာမှုများထောက်ခံပါတယ်။ ပထမဦးစွာက VTA ၏ activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ endogenous opioids ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, VTA အာရုံခံအတွက် Mor ၏ ligand-သွေးဆောင် activation အတွက်မိတ်လိုက်ရလဒ်များကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်အမိတ်လိုက်အလားအလာဟာ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်မှပံ့ပိုးခြင်း, VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏ activation မှုအားပြခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် activation ၏အလားတူပုံစံဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့် DA လွှတ်ပေးရေးရန်, NAc အာရုံခံလေ့လာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာ VTA အတွက် nondopaminergic အာရုံခံ၏ activation အတွက်ရလဒ်. စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါငျးတို့သလည်းကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ် Spatial နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုန့်ပြန်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုထောကျပံ့။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုသဘာဝအပြုအမူသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့် VTA အတွက် Mor activation ၏ပထမဦးဆုံးသရုပ်ပြခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ အခြားသူများက (တုန့်ပြန် exogenously opioids လျှောက်ထားရန်, ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုး၏အခြားဒေသများရှိ Mor activation မြင်ယောင်ဆင်တူတဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြKeith et al, 1998; Trafton et al, 2000) နှင့်အီစထိုဂျင် (Eckersell et al, 1998; Sinchak နှင့် Micevych, 2001). ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေလတ်တလောလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအထီးကြွက်များတွင် hypothalamus ၏ medial preoptic နျူကလိယအတွက် Mor International ဖြစ်ပေါ်စေသည်ပြခဲ့ကြ (Coolen et al, 2003). ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ Mor International endogenous opioid peptides သည်ဤလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဖြန့်ချိလျက်ရှိသောအကြံပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်အောက်ပါပု VTA အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒီ technique ကို Mor ၏ endogenous activation များအတွက်အသုံးဝင်သောအမှတ်အသားကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်း, က opioid လွှတ်ပေးရန်တစ်သွယ်ဝိုက်အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ VTA အတွက် Mor activation တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တိကျတဲ့ opioid ligand ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများ (beta-နဲ့အတူ Endorphins နှစ်ဦးစလုံးကိုပြသMansour et al, 1988) နှင့် enkephalin (ဂျွန်ဆင် et al, 1980; Fallon နှင့် Leslie, 1986) ကို VTA အတွက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် pharmacological သက်သေအထောက်အထား (ဤ peptides ၏နှစ်ခုစလုံး mesolimbic DA system ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်ကိုပြသBroekkamp et al, 1979; Stinus et al, 1980; Dauge et al, 1992) ။ ထို့အပြင်လတ်တလောအစီရင်ခံစာများ VTA နှင့် -1-2 endomorphin အလွန် Mor-တိကျတဲ့ ligands (၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြခဲ့ကြGreenwell et al, 2002). ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Mor အပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ပေမဲ့လည်းတခြား opioid receptors ကိုလည်း mesolimbic စနစ်၏လိင်-သွေးဆောင် activation အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Autoradiographic လေ့လာမှုများအများကြီးနိမ့်ထုမှာ Mor (နှိုင်းယှဉ်ဆိုသော်ငြားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် Kappa opioid receptors, အ VTA အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းပြသMansour et al, 1987, 1988; Dilts နှင့် Kalivas, 1990; Xia နှင့် Haddad, 1991) ။ Kappa agonists လုံးဝအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်နေချိန်မှာထို့ပြင် VTA သို့ထုံမွှန်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် agonists (က, NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရေးကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မှာလျော့နည်းအစွမ်းထက် 100-1000 ကြိမ်များမှာDevine et al, 1993), အ mesolimbic DA လမ်းကြောင်း၏လိင်-သွေးဆောင် activation Mor activation မှတဆင့်အဓိကအားဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြု။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်ခန္ဓာဗေဒ data တွေကိုထပ်မံ Mor သွယ်ဝိုက်ဂါဘမြို့သား interneurons ၏တားစီးကနေတဆင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်သောသက်သေအထောက်အထားများကိုထောကျပံ့။ confocal microscopy အသုံးပြုခြင်း, Mor GABAergic အာရုံခံမှအနီးကပ် apposition အတွက် GABAergic ဆဲလ်အသေကောင်များနှင့်အမျှင်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအမျှင် axon ဆိပ်ကမ်း၏ညွှန်ပြ boutons ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ရှိ၏ ဤအရပ်မှ Mor GABAergic ဆဲလ်အသေကောင်မှ presynaptic တည်ရှိသောခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် VTA အတွက် Mor DA အာရုံခံ (ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့သဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏Garzon နှင့် Pickel, 2001), တစ်သွယ်ဝိုက်တဲ့ဆကျဆံရေးအကြံပြုခြင်း။ ထို့အပွငျ pharmacological လေ့လာမှုများ (Mor agonists ဂါဘမြို့သားအာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်တားစီးကြောင်းပြသ DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်လှုံ့ဆော်လျက်, NAc သို့ DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြမဿဲနှင့်ဂျာမန်, 1984; Leone et al, 1991; ဂျွန်ဆင်နှင့်မြောက်, 1992) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် International ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Mor ပါဝင်သောအများစုဆဲလ်အသေကောင်တည်ရှိသည်ရှိရာ VTA ၏ rostral သောအဘို့ကိုကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ဒီဒေသထဲမှာ, Mor ပါဝင်သောဆဲလ်အသေကောင်များ 79% ကို Mor International ၏အများဆုံး GABAergic အာရုံခံ၌ပါသောအကြံပြုခြင်း, GABAergic ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့က VTA အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအားလုံး GABAergic အာရုံခံဒေသခံ interneurons လျှင်ဂါဘမြို့သားအာရုံခံကိုလည်း NAc သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဖို့ပရိုဂျက်ပေးပို့ပြီးကတည်းကသို့ရာတွင်ထိုသို့ (မသိရသေးဖြစ်ပါသည်Carr ကနှင့် Sesack, 2000). မည်သို့ပင်ဆိုစေဤရလဒ်များကိုသဘာဝကလှုံ့ဆော်အပြုအမူကာလအတွင်း Mor ligands အဆိုပါ VTA အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ activation နှင့် NAc အတွက် DA ၏ဖြန့်ချိမှု GABAergic interneurons တားစီးကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေသာဓကသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကိုလည်း VTA အတွက် DA အာရုံခံ၏လိင်-သွေးဆောင် activation ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ က Mor activation DA အာရုံခံ၏ activation စေ activation ၏တူညီသောပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုစနစ်များ-ကြောင်း, ထို Mor အတွက်အာရုံကြော activation ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို-အကြံပြုခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activation ဖြစ်ပါတယ်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကွောငျးကိုတိုက်ရိုက်ပြသမခံခဲ့ရပေမယ့် နှင့် DA စနစ်များဆက်နွယ်နေကြောင်းနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ activated VTA DA အာရုံခံအဆိုပါ NAc မှပရောဂျက်လျှင်၎င်းသည်လက်ရှိတွင်မသိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထားများကို (NAc အဆိုပါ VTA ထံမှ DA စီမံကိန်း၏အဓိကပစ်မှတ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်Swanson, 1982) ။ ထို့အပွငျက (ထို NAc အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် Fos-မှာ IR အဆိုပါ VTA အတွက် opioid အရေးယူမှု၏ရလဒ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်Bontempi နှင့် Sharp, 1997). ပစ္စုပ္ပန် data တွေကိုထပ်မံဒီမော်ဒယ်ကိုထောကျပံ့နှင့် VTA သို့ဖြန့်ချိ endogenous opioids အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းဒီ mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ activation အစပျိုးကဖော်ပြသည်။ ထို့အပွငျ sex- နှင့် cue-သွေးဆောင် Fos စကားရပ် NAc core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ NAc ဤမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း (ထို circuitry ဖြန်ဖြေလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ histochemical ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ကွာခြားHeimer et al, 1997; ကယ်လီ, 1999; Zahm, 1999) ။ အထူးသဖြင့်, ထို NAc Core အဆိုပါ dorsal striatum မှတူညီပိုင်ဆိုင်လျက်, ventral pallidum, subthalamic နျူကလိယနှင့် substantia nigra အပါအဝင်ဂန္ Basal ganglia output ကိုအဆောက်အဦများ, ရန်စီမံချက်များပေးပို့သည်။ ပြောင်းပြန်ဟာ NAc shell ကိုအဓိကအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော VTA, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် brainstem ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစင်တာများ (အဖြစ် limbic အဆောက်အဦမှပရိုဂျက်ပို့ပေးHeimer et al, 1991; Zahm နှင့် Brog, 1992) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်တွေကိုပုဆန္ဒအလျောက်မော်တာ function ကိုဆက်စပ်သော mesolimbic အစိတ်အပိုင်းများကို Activation အဖြစ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှု။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏အဓိကသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ကြောင်းပြသပေမယ့်ဒီ activation ဖြစ်ပေါ်အခါအပြုအမူကာလအတွင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ တကယ်တော့ဒီစနစ်၏ activation လိင်ရင်တော့မှားမယ်အတွက်အပြုအမူစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင် vs အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များ။ အထူးသဖြင့် VTA နှင့် NAc opioids အပြုအမူများ၏အစာစားချင်စိတ်အဆင့်စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟုအကြံပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်၏မရှိခြင်းအတွက်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုန့်ပြန် activated ခဲ့ကြသည်။ ဒီဆင်ခြင်တုံတရားသည် Shultz ၏လေ့လာမှုများနှင့်ကိုက်ညီပြီး၊ အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်သောအခါမျောက်များ၏ VTA တွင် dopaminergic လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည် (Schultz, 2001) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုထဲမှာ, မိတ်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်လိင်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတဲ့ conditional လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်များက activated dopamine အာရုံခံခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်း Mor ၏ activation လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သာ။ ထို့ကွောငျ့ VTA အတွက် endogenous opioids ဆုချ-ခန့်မှန်းဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုံ့ပြန်မှု၌ဤတိုက်နယ်၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ မတူတာကတော့, Schultz (2001) ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းမရသောအခါ, dopamine အာရုံခံအကျိုးကို၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း activated ခဲ့ရုပ်ပြ။ ဒီအယူအဆတွေနဲ့သဘောတူညီချက်မှာ, လိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ activation ခန့်မှန်းရခက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခင်အစီရင်ခံစာများ (သုတ်ရည်လွှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြAgmo နှင့် Berenfeld, 1990; လိုပက်ဇ် et al, 1999). သို့သော် microdialysis လေ့လာမှုများတစ်လက်ခံအမျိုးသမီး၏အနံ့ကိုတောင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားထဲမှာ, NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုပြသကြ (Wenkstern et al, 1993) ။ အမျိုးသမီးအနံ့ထိတွေ့လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားတစ်ဦးကြိုးသို့မဟုတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်လျှင်၎င်းသည်လက်ရှိတွင်မသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
Pharmacological လေ့လာမှုများ mesolimbic စနစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Mor အဆိုပါ VTA သို့တိုက်ရိုက်ထုံမွှန်း agonists (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့မစ်ချယ်နှင့် Stewart က, 1990) ။ ပြောင်းပြန် naloxone တစ် bilevel အခန်း anticipatory အဆင့်အပြောင်းအလဲများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုအတိုင်းအတာ (များ၏အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေဗန် Furth နှင့်ဗန် Ree, 1996) ။ အဆိုပါ NAc အတွက် 6-Hyroxydopamine (6-OHDA) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် DA ရန်ဒီစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အလားတူလျှောက်လျော့နည်းစေ (ဗန် Furth et al, 1995) ။ ထို့ပြင် NAc ၏ 6-OHDA ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစတင်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် DA ပြင်ပတွေကိုတုန့်ပြန်လိင်စိတ်နိုးထအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု, အထီးကြွက်များတွင် noncontact စိုက်ထူအယှက် (လျူ et al, 1998) ။ ဤရွေ့ကားထိန်းသိမ်းရေးဒီလမ်းကြောင်းအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်ထက်သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအကြံပြု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, DA သို့မဟုတ် opioid ဖြစ်စေ receptors ဖို့ရန် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှ conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတားစီးAgmo နှင့် Berenfeld, 1990; Meisel et al, 1996).
စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ကိုလည်း VTA အများအပြား nondopaminergic အာရုံခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-related သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် activated ခဲ့လေ့လာသည်။ ဤသည် endogenous opioids မှတဆင့် DA အာရုံခံ၏ activation ထက်အခြားလမ်းကြောင်းဟာ VTA ၏ activation အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အမှန်စင်စစ်ထိုသို့သော medial prefrontal cortex (mPFC) အဖြစ်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက် VTA အတွက် nondopaminergic အာရုံခံမှ excitatory input ကိုပေး (Sesack နှင့် Pickel, 1992; Carr ကနှင့် Sesack, 2000). အထူးသ mPFC VTA GABAergic interneurons နှင့် GABAergic mesoaccumbens projection အာရုံခံမှစီမံကိန်း၏ afferents, ဒါပေမယ့် GABAergic အာရုံခံ mesocortical ဖို့မ (Carr ကနှင့် Sesack, 2000) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိင်-activated nondopaminergic အဆိုပါ VTA အတွက်အာရုံခံအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အကျိုးသည်၎င်းတို့၏အရေးပါမှု၏ဆက်သွယ်မှုနှင့် neurochemical phenotype စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။
ထိုကွဲပြားမှုကစာရင်းအင်းပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို, အ VTA ၏လိင်-သွေးဆောင် activation အတွက် rostrocaudal ကွဲပြားခြားနားမှု၏တည်ရှိမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ Bolanos နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမကြာသေးမီက VTA အတွင်းကွဲပြားမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဒေသများယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောဖျန်ဖြေသောဖြစ်နိုင်ခြေသရုပ်ပြပါပြီ vs စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှု။ အထူးသဖြင့်သူတို့ phospholipase ကို C ၏ overexpression သရုပ်ပြ 1 (PLC အဆိုပါ rostral VTA အတွက် 1) PLC နေစဉ်, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့် sucrose များအတွက် preference ကိုပိုကောင်းစေပါတယ် အဆိုပါ caudal VTA အတွက် 1 overexpression (ဆုလာဘ် preference ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှ sensitivity ကိုတိုးပွားစေBolanos et al, 2003) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေရလဒ်များ rostral, ဒါပေမယ့် caudal မအကြံပြုသဘောတူညီချက်အတွက်, VTA လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုသည်သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုပြုသည့်အပြုအမူ - အထီးလိင်အပြုအမူကာလအတွင်း mesolimbic စနစ်ကိုသက် ၀ င်စေသည်။ အထူးသဖြင့်ဤစနစ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်မိတ်လိုက်ခြင်းအပြုအမူများနှင့်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သည်။ mesolimbic စနစ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတွင်အလွန်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ပညာရှိ 1996) ။ သဘာဝကအခြေအနေများအောက်တွင်ဒီစနစ်၏ function ကိုလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့, ငါတို့မူးယစ်ဆေးစွဲ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရရှိစေနိုင်သည်။
Agmo A, Berenfeld R (1990) ။ ကြွက်များတွင်သုက်ပိုး၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအားဖြည့်ပေးခြင်း - opioids နှင့် dopamine တို့၏အခန်းကဏ္။ ။ Behav Neurosci 104: 177-182 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Agmo A, Gomez M (1993) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့် naloxone ကို medial preoptic intoရိယာသို့ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ Behav Neurosci 107: 812-818 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Bolanos, CA, Perrotti LI, Edwards က S နဲ့, Eisch AJ, Barrot M က, Olson VG et al (2003) ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ၏ကွဲပြားဒေသများရှိ Phospholipase Cgamma ကွဲပြားခြားနားစိတ်ဓါတ်များ -related အပြုအမူ modulates ။ J ကို Neurosci 23: 7569-7576 ။ | PubMed |
Bontempi B, Sharp FR (၁၉၉၇) ။ ကြွက် striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်စနစ်တကျမော်ဖင်းအကိုက် - သွေးဆောင် Fos ပရိုတိန်းဟာ substia nigra နှင့် ventral tegmental inရိယာထဲမှာ mu opioid receptors အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ J ကို Neurosci 1997: 17-8596 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Broekkamp CL, Phillips AG, Cools AR (1979) ။ dopaminergic A10 intoရိယာသို့ enkephalin microinjection ၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ သဘာဝတရား 278: 560-562 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Carr က DB, Sesack SR (2000) ။ ကြွက် prefrontal cortex ထံမှ ventral tegmental toရိယာမှစီမံကိန်း: mesoaccumbens နှင့် mesocortical အာရုံခံနှင့်အတူ synaptic အသင်းအဖွဲ့များအတွက်ပစ်မှတ်တိကျတဲ့။ J ကို Neurosci 20: 3864-3873 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Childress A, Ehrman R, McLellan AT, O'Brien C (1988) ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းအတွက်အခြေအနေတပ်မက်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွ: ပဏာမအစီရင်ခံစာ။ NIDA Res Monogr 81: 74-80 ။ | PubMed |
Coolen LM, Fitzgerald ME, ဝဲလ် AB, ယု L ကို, Lehman MN (2003) ။ အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိအောက်ပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ mu opioid receptors ၏ activation ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ။
Damsma, G, Pfaus JG, Wenkstern: D, Phillips AG, Fibiger HC (1992) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည် dopamine ကူးစက်မှုကိုနျူကလိယ accumbens နှင့်အထီးကြွက်များ၏ striatum - အသစ်အဆန်းနှင့်ရွေ့လျားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ Behav Neurosci 106: 181-191 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Dauge V၊ Kalivas PW, Duffy T, Roques BP (၁၉၉၂) ။ မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့် extracellular dopamine အပေါ် VTA အတွက် enkephalin catabolism ကိုတားစီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦး နှောက် Res 1992: 599-209 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Devine DP, Leone P ကို, Pocock: D, ပညာရှိ RA (1993) ။ Basal mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရေးမော်ဂျူအတွက် ventral tegmental mu, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် Kappa opioid receptors ၏ differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု: Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှုများ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 266: 1236-1246 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Dilts RP, Kalivas PW (1990) ။ radioiodinated [2-D-penicillamine, 5-D-penicillamine] enkephalin ကိုအသုံးပြု။ mesocorticolimbic dopamine စနစ်အတွင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် opioid receptors ၏ Autoradiographic မူပြောင်းခြင်း။ Synapse 125: 6-121 ။ | PubMed |
Duvauchelle CL, Ikegami A, Castaneda E (2000) ။ အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်သွေးကြောသွင်းခြင်းမှကင်းထုတ်လုပ်သော dopamine ပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။ Behav Neurosci 114: 1156-1166 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Eckersell CB, Popper P, Micevych PE (1998) ။ အဆိုပါ medial preoptic နျူကလိယနှင့် medial amygdala အတွက် mu-opioid အဲဒီ receptor immunoreactivity ၏အီစထိုဂျင် - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲတချို့။ J ကို Neurosci 18: 3967-3976 ။ | PubMed |
Everitt BJ၊ Cador M၊ Robbins TW (1989) ။ လှုံ့ဆော်မှု - ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအတွက် amygdala နှင့် ventral striatum အကြား interaction က: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်၏ဒုတိယအမိန့်အချိန်ဇယားကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 30: 63-75 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Everitt BJ, ဖွာ P ကို, Kostarczyk အီးတေလာက S, Stacey P ကို ​​(1987) ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများလေ့လာရေး (Rattus norvegicus): လက်ခံသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် တွဲ၍ အတိုချုပ်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်ဗြဲထိန်းချုပ်မှု။ J ကို Comp Psychol 101: 395-406 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Everitt BJ, Stacey P ကို ​​(1987) ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်နှင့်အတူဆာပအပြုအမူများလေ့လာရေး (Rattus norvegicus): II ကို။ preoptic areaရိယာကိုတွေ့ရှိရပါသည်, သင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Comp Psychol 101: 407-419 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Fallon JH၊ Leslie FM (1986) ။ ကြွက် ဦး နှောက်ထဲတွင် dynorphin နှင့် enkephalin peptides များဖြန့်ဝေ။ J ကို Comp Neurol 249: 293-336 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Garzon M, Pickel VM (2001) ။ Plasmalemmal mu-opioid receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းအဓိကအားဖြင့်ကြွက် ventral tegmental inရိယာ၌ nondopaminergic အာရုံခံ။ Synapse 41: 311-328 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Greenwell TN, Zangen တစ်ဦးကမာတင်-Schild S က, ပညာရှိ RA, Zadina je (2002) ။ Endomorphin-1 နှင့် hypothalamus အတွက် -2 immunoreactive ဆဲလ် ventral tegmental ဧရိယာမှ fluoro-ကိုရွှေဆေးထိုးခြင်းဖြင့်တံဆိပ်တပ်ထားပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးသုတေသနညီလာခံ: ပစိဖိတ် Grove, CA. p 26 ။
Harlow အီးလိန်း: D (eds) (1988) ။ ပဋိ: တစ်ဦးကဓာတ်ခွဲခန်းလက်စွဲစာအုပ်။ အေးနွေဆိပ်ကမ်းဓာတ်ခွဲခန်း: အေးနွေဆိပ်ကမ်း, နယူးယော့။
Heimer L ကို, Alheid gf, က de Olmos JS, Groenewegen HJ, Haber SN, Harlan RE et al (1997) ။ အဆိုပါ accumbens: core-shell ကို dichotomy ကျော်လွန်ပြီး။ J ကို Neuropsychiatry Clin Neurosci 9: 354-381 ။ | PubMed | ChemPort |
Heimer L, Zahm DS, Churchill L, Kalivas PW, Wohltmann C (1991) ။ ကြွက်များတွင် accumbal core နှင့် shell ကို၏ projection ပုံစံများအတွက်အထူးသ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 41: 89-125 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Hull က EM, Meisel RL, Sachs bd (2002) ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို (eds) ။ ဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့် Hormones ။ Elsevier သိပ္ပံ (USA): San Diego မှ, CA. စစ 1-138 ။
Ikemoto S, Kohl RR, McBride WJ (1997) ။ အဆိုပါ anterior ventral tegmental inရိယာ၌ GABA (က) အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို Neurochem 69: 137-143 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ဂျွန်ဆင် RP၊ Sar M၊ Stumpf WE (1980) ။ ပေါင်းစပ် histofluorescence-immunocytochemistry အားဖြင့်သရုပ်ပြကြွက် substantia nigra နှင့် ventral tegmental ofရိယာ၏ dopamine အာရုံခံအပေါ် enkephalin ၏တစ် ဦး ကမြေမျက်နှာသွင်ပြင်မူပြောင်းခြင်း။ ဦး နှောက် Res 194: 566-571 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
ဂျွန်ဆင် SW, North RA (1992) ။ ဒေသခံ Interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် Opioids သည် dopamine အာရုံခံများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ J ကို Neurosci 12: 483-488 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Keith DE, Anton B, Murray SR, Zaki PA ဆိုပြီး, Chu ကို PC, Lissin DV et al (1998) ။ mu-Opioid အဲဒီ receptor International: opiate မူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ရှေးရိုးစွဲ endocytic ယန္တရားအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိ စသည်တို့အတွက် နှင့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ ဦး နှောက်၌တည်၏။ Mol Pharmacol 53: 377-384 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
ကယ်လီ AE (1999) ။ appetitive အပြုအမူတွေကိုအတွက် ventral striatal အခန်း၏ Functional တိကျတဲ့။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 877: 71-90 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Klitenick MA, DeWitte P ကို, Kalivas PW (1992) ။ တစ်ခု: opioids နှင့်ဂါဘမြို့သားအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ somatodendritic dopamine လွှတ်ပေးရန်၏စည်းမျဉ်း Vivo အတွက် microdialysis လေ့လာမှု။ J ကို Neurosci 12: 2623-2632 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Leone P ကို, Pocock: D, ပညာရှိ RA (1991) ။ မော်ဖင်းအကိုက် -dopamine အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု: ventral tegmental morphine သည်နျူကလိယတိုးပွားမှု dopamine release ကိုတိုးပွားစေသည်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 39: 469-472 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Liu YC, Sachs BD, Salamone JD (1998) ။ radiofrequency သို့မဟုတ်နျူကလိယနျူကနေ dopamine-depleting ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ကြွက်တွေမှာလိင်အပြုအမူ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 60: 585-592 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
လိုပက်ဇ် HH, Olster DH, Ettenberg တစ် ဦး (1999) ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု: အဓိကမက်လုံးများနှင့် copulatory အတွေ့အကြုံ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Horm Behav 36: 176-185 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Mansour A၊ Khachaturian H၊ Lewis ME၊ Akil H၊ Watson SJ (1987) ။ ကြွက်များ၏အရှေ့တွင်နှင့် midbrain အတွက် mu, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် kappa opioid receptors ၏ Autoradiographic ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကို Neurosci 7: 2445-2464 ။ | PubMed | ChemPort |
Mansour A၊ Khachaturian H၊ Lewis ME၊ Akil H၊ Watson SJ (1988) ။ CNS opioid receptors ၏ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci 11: 308-314 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Martinez ငါ, Paredes RG (2001) ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှိန်မြှင့်မိတ်လိုက်ခြင်းကသာနှစ် ဦး စလုံးလိင်ကြွက်များအတွက်အကျိုးရှိသည်။ Behav 40 510: 517-XNUMX ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Matthews RT၊ ဂျာမန်ဒီစီ (၁၉၈၄) ။ မော်ဖင်းအကိုက်ဖြင့်ကြွက် ventral tegmental dရိယာ dopamine အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားဘို့ Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 1984: 11-617 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Meisel RL, Joppa MA, Rowe RK (1996) ။ Dopamine receptor antagonists များသည်ဆီးရီးယားအမျိုးသမီးဟမ်းစ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအရအခြေအနေကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ Eur J ကို Pharmacol 309: 21-24 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Mitchell JB, Gratton A (၁၉၉၁) ။ လွတ်လပ်စွာပြုမူဆက်ဆံနေသောကြွက်များတွင်မြန်နှုန်းမြင့် chronoamperometric လေ့လာမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ထုတ်ဖော် dopamine လွှတ်ပေးရေး၏ Opioid မော်ဂျူလ်နှင့် sensitization ။ ဦး နှောက် Res 1991: 551-20 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Mitchell JB၊ Stewart J (1990) ။ ဘိန်းကို intra-VTA ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်ကြွက်ကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 35: 643-650 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Ostrander MM, Badiani တစ်ဦးက, နေ့ HE, က Norton CS, Watson ဟာ SJ, Akil H ကို et al (2003) ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသမိုင်းသည် amphetamine သွေးဆောင် c-fos mrna အသုံးအနှုန်းကို basal ganglia၊ အလယ်ပိုင်းတိုးချဲ့ amygdala နှင့်ဆက်စပ် limbic forebrain တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 120: 551-571 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Paredes RG, Alonso A (1997) ။ အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ထားသော (အရှိန်အဟုန်) ဖြင့်လိင်အပြုအမူသည်အခြေအနေကို ဦး စားပေးသည်။ Behav Neurosci 111: 123-128 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Pfaus JG, Damsma, G, Nomikos GG, Wenkstern DG, Blaha CD ကို, Phillips က AG က et al (1990) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ကြွက်များတွင် Dopamine ကူးစက်မှုကိုတိုးပွားစေသည် ဦး နှောက် Res 530: 345-348 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Pfaus JG, Phillips က AG က (1989) ။ dopamine receptor antagonists များ၏မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုသည်အထီးကြွက်များ၏လိင်အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 98: 363-368 ။ | PubMed | ChemPort |
Pfaus JG, Phillips က AG က (1991) ။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်အပြုအမူ၏ anticipatory နှင့် consummatory ရှုထောင့်အတွက် dopamine ၏အခန်းက္ပ။ Behav Neurosci 105: 727-743 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Schultz W က (2001) ။ dopamine အာရုံခံအားဖြင့်အချက်ပြဆုလာဘ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် 7: 293-302 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Sesack SR, Pickel VM က (1992) ။ နျူကလိယအတွက် catecholamine ဆိပ်ကမ်း၏တံဆိပ်ကပ်ထားသောအာရုံခံပစ်မှတ်အပေါ်ကြွက် synapse အတွက် prefrontal cortical efferents septi accumbens နှင့် ventral tegmental inရိယာထဲမှာ dopamine အာရုံခံအပေါ်။ J ကို Comp Neurol 320: 145-160 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Sinchak K, Micevych PE (2001) ။ mu-opioid receptors ၏အီစထိုဂျင် activation ၏ Progesterone ပိတ်ဆို့ခြင်းမျိုးပွားအပြုအမူကိုထိန်းညှိ။ J ကို Neurosci 21: 5723-5729 ။ | PubMed |
Stinus L, Koob GF, Ling N, Bloom FE, Le Moal M (1980) ။ optrate-dopamine interaction ကများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: အ ventral tegmental areaရိယာသို့ endorphins ၏ပြုတ်ရည်ကသွေးဆောင် Locomotor activation ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 77: 2323-2327 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Swanson LW (1982) ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသများ၏စီမံကိန်း: ကြွက်များတွင်ပေါင်းစပ်ချောင်း retrograde tracer နှင့် immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦး နှောက် Res Bull 9: 321-353 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Trafton JA, Abbadie C၊ Marek K, Basbaum AI (2000) ။ [mu] -opioid receptor မှတစ်ဆင့် Postsynaptic အချက်ပြခြင်း: dorsal horn neurons များ၏ exogenous opioids နှင့် noxious stimulation တို့အားတုံ့ပြန်မှုများ။ J ကို Neurosci 20: 8578-8584 ။ | PubMed | ChemPort |
ဗန် Furth WR, ဗန်ရိ JM (1996) ။ လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု: အ ventral tegmental inရိယာ၌ endogenous opioids ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦး နှောက် Res 729: 20-28 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
ဗန် Furth WR, Wolterink, G, ဗန်ရိ JM (1995) ။ ပုလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်း: ဦး နှောက် opioids နှင့် dopamine ပါဝင်ပတ်သက်။ Brain Res Brain Res Rev 21: 162-184 ။ | PubMed |
Wallace ဘီစီ (1989) ။ ကိုကင်းဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်အက်ကွဲခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြdeterm္ဌာန်းချက်။ J Subst အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံမှု 6: 95-106 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Watson Jr RE, Wiegand SJ, Clough RW, Hoffman GE (1986) ။ ရေရှည် peptide immunoreactivity နှင့်တစ်သျှူး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ cryoprotectant အသုံးပြုခြင်း။ Peptides 7: 155-159 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Wenkstern: D, Pfaus JG, Fibiger HC (1993) ။ လိင်ကြွယ်ဝသောကြွက်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့စဉ် Dopamine ဂီယာသည်အထီးကြွက်များ၏နျူကလိယတွင်တိုးပွားလာသည်။ ဦး နှောက် Res 618: 41-46 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
ပညာရှိ RA (1996) ။ စွဲ၏ Neurobiology ။ Curr Opinion Neurobiol 6: 243-251 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | ChemPort |
Xia Y, Haddad GG (1991) ။ ကြွက် brainstem အတွက် opioid receptors ၏ Ontogeny နှင့်ဖြန့်ဖြူး။ ဦး နှောက် Res 549: 181-193 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |
Zahm DS (1999) ။ နျူကလိယ၏ function ကို - ခန္ဓာဗေဒသက်ရောက်မှု core နဲ့ shell ကို subterritories accumbens ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 877: 113-128 ။ | PubMed | ChemPort |
Zahm DS, Brog JS (1992) ။ ကြွက် ventral striatum ၏ 'accumbens' အစိတ်အပိုင်းအတွက်နယ်မြေများ၏အရေးပါမှုကိုတွင်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ 50: 751-767 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ChemPort |